चारदिन पछि नेप्सेमा सुधार, परिसूचक १३३८.०१ विन्दुमा | गृहपृष्ठ
Home बजार चारदिन पछि नेप्सेमा सुधार, परिसूचक १३३८.०१ विन्दुमा
चारदिन पछि नेप्सेमा सुधार, परिसूचक १३३८.०१ विन्दुमा
जेठ २, काठमाडौं । बुधवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत बढेर बन्द भएको छ । कारोबार भएको पहिलो एक घण्टादेखि बढेको बजार अन्त्यसम्म बढेर बन्द भएको हो । १ हजार ३ सय ३३ दशमलव ८६ विन्दुबाट शुरु भएको कारोबार अन्त्यमा ४ दशमलव १६ अङ्क बढेर १ हजार ३ सय ३८ दशमलव शून्य १ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । यस दिनको नेप्से विन्दु सोमवारको नेप्से विन्दुमा बन्द भएको छ । सो दिन १ हजार ३ सय ३८ विन्दुमा बन्द भएको बजार बुधवार सोही विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ५८ कम्पनीको २ हजार ५ सय ९८ पटकको व्यापारमा ४ लाख २३ हजार ३ सय ७६ कित्ता शेयरको रू. २२ करोड २० लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताहरुलाई ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गराउन निर्देशन दिएपछि मङ्गलवार कारोबार रकम घटेको थियो । सोही अनुसार बुधवारसम्म १६ हजार लगानीकर्ताहरुले केवाईसी अद्यावधिक गराएपछि यस दिन कारोबार रकम सहित बजार बढ्न पुगेको हो ।
१० समूहको परिसूचकमा आठ समूहको परिसूचक बढेको छभने दुई समूहको परिसूचक घटेको छ । व्यापार समूहको परिसूचक २ दशमलव ९१ प्रतिशत, होटलको २ दशमलव ३९, लघुवित्तको १ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेको पछि नेप्से परिसूचक बढ्न पुगेको हो । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक शून्य दशलमव २९ प्रतिशत र वित्त समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ४४ प्रतिशलते घटेको छ ।
वोमी माइक्रोफाइनान्सको प्रतिकित्ता रू. १ हजार ८ सय ६० मा रू. १ करोड ५६ लाख बराबरको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ७ सय ७० मा रू. ८२ लाख ९३ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
यस दिन मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स लिमिटेडको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेको छ भने जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य ६ दशमलव ९५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, वोल्ड मर्चेण्ट बैङ्किङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीको शेयर मूल्य ४ दशमलव ३१ प्रतिशतले घटेको छ ।
कारोबार भएका १ सय ५८ कम्पनीमा ८५ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ५७ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, १६ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।
यस दिन कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार भएको दिनको तुलनामा ४८ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छ । कारोबार रकम रू. ७ करोड २८ लाख बढेको हो । कुल बजार पूँजीकरण शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत बढेर रू. १५ खर्ब ७० अर्ब पुगेको छ । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत बढेर २ सय ८२ दशमलव शून्य ७ अङ्क पुगेको छ । त्यसैगरी, यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्युट्रन जोन अर्थात् ५० दशमलव ३६ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । नेप्सेको एडी रेशियो शून्य दशमलव १ दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको छ । यसले बजार वुलिश वृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।